जाडोमा धेरैले गर्ने यि ७ गाल्तिहरु
१२ माघ २०७४, शुक्रबार १२:०५
मौसमी परिवर्तनले हाम्रो शरीरलाई धेरै प्रकारले प्रभाव पार्छ । रुघा, खोकी, एलर्जी र ज्वरो असामान्य घटना होइन । कुनै निश्चित वातावरणसँग छिट्टै घुलमिल हुनुको साटो जाडोका कारण अधिकांश समय अल्छी बन्छौँ । जसका कारण हामीले जानीनजानी विभिन्न स्वास्थ्य समस्या.....
कुन उमेरमा कति हुनुपर्छ रक्तचाप ?
१२ माघ २०७४, शुक्रबार ११:४७
अधिकांश घरमा खोज्ने हो भने, उच्च रक्तचापको रागी भेटिन सक्छ । बुढ्यौलीसँगै उच्च रक्तचापको समस्या देखिन थाल्छ, जो स्वभाविक हो । तर, अहिले बुढ्यौलीमा मात्र होइन, युवा र किशोरहरुमा समेत यस्तो समस्या देखिन थालिएको छ । खासगरी वर्तमानमा हामीले जुन किसिमको.....
यदि तपाइ चाहानुहुन्छ कि तपाईँको हुनेबाला बच्चा तेज दिमाग र स्मार्ट होस भने खानामा समावेश गर्नुस् यि तत्वहरू
२५ पुष २०७४, मंगलवार १४:१५
यदि तपाईँ चाहानुहुन्छ, कि तपाईँको हुनेबाला बच्चा तेज दिमाग र स्मार्ट होस भने पोषक तत्वले भरिपूर्ण खानाको साथै भिटामिन खान नबिर्सनुहोस । हार्वर्ड, क्यालीफोर्निया र ल्यान्केस्टर यूनिभर्सिटीमा ९ देखि १२ वर्ष उमेरका ३ हजार बच्चाहरुमाथि एक अध्ययन गरियो.....
घाँटीमा इन्फेक्सन भयो ? यस्तो छ घरेलु उपाय
२५ पुष २०७४, मंगलवार १३:५४
चिसोको कारण घाँटीमा समस्या हुन्छ । हामीमध्ये धेरैले भोगिरहेको समस्या हो । घाँटी किन दुख्छ ? यसको अनेक कारण हुन्छ । -धेरै मसलेदार भोजन धेरै सेवन गर्दा -कब्जियतको कारण -कुनै ब्याक्टेरिया वा भाइरसको कारण इन्फेक्सन -गलामा टन्सिल हुँदा यद्यपी जाडोमा.....
२४ पुष २०७४, सोमबार १०:५०
काठमाडौं, पुस २४ गते । आजकल सामान्य रोगका लागि पनि एलोपेथिक औषधि खानुपर्छ । तर कोही यस्ता मानिस पनि छन जो सकेसम्म आयुर्वेदिक औषधिमात्र सेवन गर्ने गर्छन् । नार्गाजुन नगरपालिकाकी ६६ वर्षीया मीठु थापा आफूलाई आयुर्वेदिक औषधिमा विश्वास लाग्ने बताउनुहुन्छ.....